Indonesian President Orders Permanent Solution to Forest Fires | Myanmar Business Today
Home Business Regional Indonesian President Orders Permanent Solution to Forest Fires
Indonesian President Joko Widodo last week ordered government officials to findapermanent solution to prevent devastating annual forest fires that he understood had been almost entirely started by humans but made worst by climate change.
“Findasolution,amore permanent one against economic-motivated forest fires because according to reports I have received, 99 percent of forest fires were started by humans,” Widodo toldameeting with cabinet ministers and heads of agencies in charge of extinguishing fires.
Widodo also noted Australia’s bushfires, which had burnt 11 hectares of forests and lands and are estimated to have killed up to 1 billion native animals.
“Climate change, rising temperatures, we all have felt them. Don’t let [fires] become big during the very hot weather or they will become hard to control,” the president said.
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နှစ်စဥ်ကြုံတွေ့နေရသော အပျက်အစီးအဆုံးအရှုံးအ‌မြောက်အများ ဖြစ်စေသည့် တောမီးကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ရေရှည်ဖြေ‌ရှင်းနည်းတစ်ခု ရှာဖွေရန် အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကို အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ Joko Widodo က ‌အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ အဆိုပါ မီးများမှာ လူကြောင့် စဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကာ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ပိုဆိုးရခြင်းဖြစ်သည်ဟူ သူနားလည်ထားကြောင်း သမ္မတက ဆိုသည်။
အင်ဒိုနီးယားနိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က လောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် လေးနှစ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး တောမီးကြောင့် သစ်တော ဟက်တာပေါင်း ၁ဒသမ၆ သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ တောမီးကြောင့် ပျက်စီးမှုနှင့် စီးပွားရေး ဆုံးရှုံးမှုမှာ အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၅ဒသမ၂ ဘီလီယံ ရှိမည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းထားသည်။
တောမိးများကြောင့် ပေါ်ပေါက်သည့် မီးခိုးများကို အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ ထိခိုက်ခံစားနေရသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်း ပေါ်ပေါက်လာစေသည်။ ထို့အပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချင်းချင်း သံခင်းတမန်ခင်း တင်းမာမှုများလည်း ပေါ်ပေါက်လာစေသည်။
Previous articleCoronavirus Shuts Macao, World’s Gambling Capital
Next articlePhilippines Steps Up Security to Shield Power Grid